Sishayele: + 86-15176918352
Ibhodi Lophahla Lwamaminerali
Fibre Glass Ceiling isichuse
Ukufakwa Kwezimvithi Zedwala
Ukufakwa Kweglasi Ngoboya
Izinto Zokuvala Izinto Ezingaphandle Kwendawo
Izinto Zokuvala Izinto Ezingaphandle Kwezindawo Empeleni, kunezindlela eziningi ongakhetha kuzo izinto zokwakha amapayipi wangaphandle, okungaba zenjoloba, uboya bengilazi, i-aluminium silicate, uboya bedwala, njll. Okucacile okuzosetshenziswa kuncike ekushiseni kwemishini nendawo iphayiphi liyathutha. ...
Okuthinta Ukushisa Okushisayo Kwezinto Zokuvala Izinto
Inkomba yokusebenza kwe-thermal yokwakheka kwezinto zokushisa ezishisayo kunqunywa ukuqhutshwa kokushisa kwempahla. Ukuncipha kokuqhuba kokushisa, kungcono ukusebenza kokufakwa okushisayo. Ngokuvamile, izinto ezine-conductivity ezishisayo ezingaphansi kuka-0.23W / (m · K) zingama-cal ...
Imikhiqizo Yengulube Isingeniso Esifushane
Uboya beglasi buvame ukuhlukaniswa ngengilazi yoboya bezingilazi nebhodi yoboya beglasi. Uboya beglasi obuzwakala buvamise ukusetshenziswa ophahleni, ophahleni, nophahla lwensimbi ukwambathisa okushisayo. Ibhodi yoboya bengilazi ivame ukusetshenziselwa ukwakhiwa kodonga, njengodonga lwangaphakathi nodonga lwangaphandle lokushisa okushisayo. Imikhiqizo yoboya bengilazi ...
Izinzuzo zeBeihua Mineral Fiber Board
Yiziphi izinzuzo zebhodi lethu le-fiber fiber? 1. Ibhodi lezimbiwa zamaminerali lisebenzisa uvolo wamaminerali wekhwalithi ephezulu njengezinto zokusetshenziswa eziyinhloko, i-asbestosi engenawo u-100%, futhi alukho uthuli olunjengenaliti. Ngeke ingene emzimbeni womuntu ngomgudu wokuphefumula futhi ayinabungozi emzimbeni womuntu. 2. Kusetshenziswa i-fiber eyinhlanganisela ne ...
Igama eligcwele lebhodi elikhishiwe libizwa ngebhodi lebhola le-polystyrene le-extruded, elaziwa nangokuthi ibhodi le-XPS. Igwebu lePolystyrene lihlukaniswe izinhlobo ezimbili: i-EPS enwebekayo ne-XPS ekhishwe ngokuqhubekayo. Uma kuqhathaniswa nebhodi le-EPS, ibhodi le-XPS yisizukulwane sesithathu sezinto eziqinile zokufaka izinto ezinezinkuni. Kuyanqoba ...
Yiziphi Izinto EzingenaMisindo Ezingasetshenziswa Ezakhiweni Zehhovisi?
Emphakathini wamanje, indawo engaphandle inomsindo. Akulula ukuthola indawo yehhovisi enokuthula. Kunomsindo omkhulu ngaphakathi nangaphandle kwezakhiwo. Ngakho-ke, into enhle yokuhlobisa umsindo iyadingeka ezakhiweni, ikakhulukazi indawo yehhovisi ...
Ukwehla Kokwehla 2 × 4 Ceiling Acoustic 2 × 2
Osayizi bamathayela ophahleni bahlukahlukene kuye ngezwe. Isibonelo, eChina, amanye amathayela ophahleni ngosayizi ongu-595x595mm, ngosayizi wemethrikhi. Ngenkathi amanye amazwe esebenzisa iyunithi laseBrithani, u-2 × 2, noma u-2 × 4, njll. Ekuthengeni uhlelo lonke lwophahla, uma uthenga zombili amathayili ophahla kanye nophrofayili ophahleni ...
Ukuqhathanisa Izinto Zokuphahla
Kunezinhlobo eziningi zokwakha emakethe. Kwesinye isikhathi besidideka ukuthi yiluphi uhlobo lwento esiyidingayo futhi kwesinye isikhathi ngemuva kokuthola ulwazi oluthile ngalezi zinto zokwakha, sisesimweni esibi. Ukukhetha okulungile, hhayi okubizayo. Yize ezinye izinto zihlekisa ...
Ngibheke phambili ekusebenzisaneni nawe!uphenyo
Ukukhiqizwa kwe-2020 kuqale kabusha